Guluf dagaal oo ka socda Jubbooyinka | Keydmedia
Guluf dagaal oo ka socda Jubbooyinka
Al-Shabaab ayaa maamusha guud ahaan gobolka Jubbada Dhexe halkaasi oo hadda kamid noqotay meelaha isha lagu hayo, ee ay ku wajahan yihiin duulaanka iyo guluf socda, oo ay Mareykanka Ciidankiisa qeyb ka yihiin.
KISMAAYO, Soomaaliya - Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa tababar usoo xiray 620 askari, oo ku biiray Ciidamada Darawiishta Maamulkiisa kadib 6 bilood oo lagu carbinayay xero ku taalla duleedka Kismaayo.
Ciidamadan oo si gaar ah u tababaran ayaa ka qaybqaadanaya Howlgalada ka dhanka ah Kooxda Al-Shabaab, ee ka socda Jubbooyinka, kaasoo ujeedkiisu yahay sidiii loo xoreyn lahaa degaanada argagaxisadda haysato.
Madaxweynaha ayaa sheegay in la isku furi doono Magaalooyinka xorta ah sidoo kalana ay Ciidamadan qaadi doonan howlgal ka dhan ah deegaanada ay Argagixisadu, iyagoo kaashanaya dadka Shacabka ah si ay uga dulqaadan dhibaatada ay lagu hayo.
Mareykankaa ayaa Ciidamo geeyay Jubbada Dhexe, kuwaasoo saldhig ku leh Baar-Sanguuni, oo dhawaan la weeraray, waxaana halkaasi lagu dilay labo sano kahor askar kamid ahaa Navy SEAL, afar kalena waa lagu dhaawacay.
0 Comments Topics: axmed madoobe jubbaland
Madax Sare oo ka qeyb-gashay aaska Shaafi Raabi
Warar 12 September 2020 16:37
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo ku xigeenkiisa oo ay wehliyeen Wasiiro, Xildhibaanno iyo Saraakiil kale ayaa ka qeybgalay salaadii Janaazadda ee lagu tukadey meydka.
Jubbaland oo askar looga dilay Qarax
Warar 6 September 2020 20:23
Farmaajo oo ogolaaday dalabka Axmed Madoobe
Warar 5 September 2020 15:42
Farmaajo oo Axmed Madoobe iyo Deni kulan kula leh Villa Somalia
Warar 5 September 2020 13:56